Wakiilka Boqorka Beelaha Daarood Iyo Issimadii Wax Ka Dhisey Dowlada Federaalk Oo Gaalkacyo Lagu Soo Dhaweeyey (Sawiro + Dhegaysi) - Horseed Media
Wakiilka Boqorka Beelaha Daarood Iyo Issimadii Wax Ka Dhisey Dowlada Federaalk Oo Gaalkacyo Lagu Soo Dhaweeyey (Sawiro + Dhegaysi) December 10, 2012 Share this:FacebookTwitterGoogleWaxaa maanta Garoonka diyaaradaha ee Cabdullaahi Yusuf magaalada Gaalkacyo ka soo degay wefdi uu hoggaaminayo Wakiilka Boqorka beelaha Daarood Boqor Burhaan Boqor Muuse, Beeldaaje Jaamac Beeldaaje Cbdullaahi iyo qaar kamid ah Isimadii reer Puntland ee wax ka dhisey dawladda Federaalka Soomaaliya oo muddo 8 bilood ah ku maqnaa magaalada Muqdisho kadib markii uu halkaas u tegey dhismihii dawladda Soomaaliyeed.
Qaar kamid ah Issimada iyo waxgaradka magaalada Gaalkacyo, iyo weliba qaar kamid ah siyaasiyiinta u sharaxan xilka madaxweynaha Puntland oo ka mid yahay Cabdiraxmaan gablax ayaa garoonka diyaaradaha ugu tegey Wakiilka Boqorka, sidoo kale dadkii soo dhaweeyey Boqorka waxaa kamid ahaa qaar kamid ah Xildhibaanada Golihii Wakiiladda ee Puntland, kuwaas oo loo soo direy in Wakiilka Boqorka ay u gudbiyaan si toos ah magaalada Qardho ilaa Bosaso. Boqor Burhaan ayaa la dejiyey hoy uu ku santo waxa uu la hadley saxaafadda.
Wakiilka Boqorka ayaa ugu horey sheegay in Bulshada reer Puntland iyo xukuumadeedaba uu salaan uga sido madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo raysalwasaaraha xukuummadda Saacid Faarax garaad.
Wakiilka Boqorka Burhaan ayaa saxaafadda u sheegay in ay Muqdisho u tageen sidii loo dhisi lahaa dawlad Soomaaliyeed oo aan kumeelgfaar ahayn taas oo lagu guuleystey. Mar uu ka hadlaayey xaaladda Puntland ayuu sheegay in uu waraysan doono isimadii dalka sii joogey iyo maamulka Puntland isla markaana uu ka shaqeynayo sidii Puntland aysan dib ugu noqoteen ee ay horey ugu socon lahayd.
Kulanka Islaan Bashiir Iyo Issimada Muqdisho ka yimid
Dhanka kale isla caawa waxaa hoyga laga dejiyey Wakiilka Boqorka iyo Issimada kale magaalada Gaalkacyo ku booqdey Islaan Bashiir Islaan Cabdulle, islaanka ayaa ku soo dhaweeyey magaalada Gaalkacyo Wakiilka Boqorka, waxaana ay ka wada hadleen xaaladihii u danbeeyey ee magaalada Muqdisho kadib dhismihii dawladda Soomaaliya, sidoo kale Islaanka ayaa warbixin ka siiyey xaaladda Gobolka Mudug wakiilka Boqorka iyo guud ahaan Puntland.
Wefdigan issimada ka kooban ayaa la filayaa in ay ku sii sugnaadaan magaalada Gaalkacyo tan iyo maalinta berri ah, kadibna waxa uu u gudbi doonaa magaalooyinka Garowe, Qardho iyo Bosaso.